TOP 10 quán dê ngon Ninh Bình thực đơn đa dạng, hương vị hấp dẫn | Excitinghochiminhcity - Excitinghochiminhcity.Vn
TOP 10 quán dê ngon Ninh Bình thực đơn đa dạng, hương vị hấp dẫn | Excitinghochiminhcity
Kushanyira guta rekare reNinh Binh pasina kunakidzwa nehunyanzvi hweelderberry nenyama yembudzi kwakafanana nekusauya kuNinh Binh. Saka farira Ninh Binh mbudzi yemakomo pane chero yakanaka resitorendi? Ngatiitei Digiticket zita iro inonaka yekudyira yembudzi muNinh Binh Vazhinji vakazara!
1 1. Cuong De restaurant
2 2. Thanh Long Restaurant
3 3. Resitorendi yendove mudhorobha regomo
4 4. Duc De Restaurant
5 5. Three Doors Restaurant
6 6. Luong Thuong restaurant 7 gomo mbudzi – hill huku
7 7. Chinh Thu Goat Meat Restaurant
8 8. Kim Da Restaurant
9 9. Huong Mai Restaurant
10 10. Minh Beo De Restaurant 35
1. Cuong De restaurant
Kero: Trang An, Truong Yen, Hoa Lu, Ninh Binh
Maawa ebhizinesi: 7:00am – 9:00pm
Reference mutengo: 60,000 VND – 400,000 VND
Cuong De iresitorendi yembudzi inonaka muNinh Binh, iri padyo nenzvimbo dzakawanda dzevashanyi dzakadai seTrang An Co, Trang An nharaunda yevashanyi, Bai Dinh pagoda, saka inokwezva vashanyi vazhinji. Iresitorendi ine nzvimbo yakakura, ine mhepo, kusanganisira makamuri akavanzika. Kunyanya, iyo resitorendi zvakare ine hombe kambasi, iyo yekudyira yese inogona kushandira kusvika 500 vashanyi, saka yakanyatsokodzera kumapoka makuru evashanyi.
Mufananidzo: Cuong De restaurant
Cuong De restaurant inokwezva madhiri kwete chete nekuda kwenzvimbo yairi nyore asiwo nemhando yechikafu chinonaka pamwe nemitengo inokwanisika. Nyama yembudzi paresitorendi inofudzwa mbudzi, inogadzikwa mundiro dzakawanda dzinonaka nevabiki vane ruzivo. Ndiro dzembudzi dzinodiwa nevatengi paCuong De restaurant dzinofanirwa kutaurwa senge: mbudzi yakagochwa, mbudzi yakagochwa musimbi yakakandwa, mbudzi yakanyikwa, mbudzi yakakangwa…
Pamusoro penyama yembudzi, chikomo chehuku paresitorendi chinofarirwawo zvakanyanya. Kukurumidza, vashandi vebasa rehunyanzvi zvakare inzvimbo yekuwedzera yeCuong De restaurant. Iyi ndeimwe yemaresitorendi embudzi anonaka muNinh Binh, inzvimbo inonzwisisika yekumira yausingafanire kupotsa kana iwe uchida kunakidzwa neNinh Binh hunyanzvi.
2. Thanh Long Restaurant
Kero: Hamlet 3, Gia Sinh Commune – Gia Vien District – Bai Dinh Pagoda, Ninh Binh Guta
Reference mutengo: 50,000 VND – 500,000 VND
Thanh Long Resitorendi zvakare imwe yemaresitorendi embudzi anonaka muNinh Binh yausingafanire kupotsa kana iwe uine mukana wekushanyira Ninh Binh. Thanh Long restaurant iri munzvimbo yakanakira vashanyi, ingangoita 1km kubva kuBai Dinh pagoda nzvimbo yevashanyi.
Mufananidzo: Thanh Long Restaurant
Thanh Long Restaurant inopa madhiri ane akapfuma uye akasiyana menyu. Nyama yembudzi ndicho chikafu chikuru chiri pamenu, uyewo ndiro rinogadzira zita reresitorendi. Iyo inonaka yembudzi nyama yekudya yeThanh Long yekudyira ine mukurumbira pedyo nekure, nzvimbo yekudyira inosarudza mbudzi dzemahara, saka mhando yacho yakanaka kwazvo, nyama yakasimba. Nyama yembudzi inogadzirwa nenzira dzakasiyana-siyana sere-re-lemon, kubvongodzwa-yakakangwa nechiri uye mhiripiri, yakagochwa nemateko emupunga, nezvimwe.
Uye zvakare, pakuuya kuThanh Long restaurant, vanodya vanogona zvakare kunakidzwa nezvimwe zvidya senge: nyama yemombe gakanje inopisa poto, baba hot pot, hill huku iyo inodiwawo nevatengi vazhinji. Nzvimbo inotonhorera uye ine ruremekedzo, inoteerera sevhisi maitiro, chikafu chinonaka nemitengo inonzwisisika, Thanh Long izano rinokwezva kana iwe uchitsvaga inonaka yekudyira yembudzi muNinh Binh.
3. Resitorendi yendove mudhorobha regomo
Kero: Ninh Xuan, Hoa Lu, Ninh Binh
Reference mutengo: 150,000 VND – 300,000 VND
Tichitaura nezvenzvimbo yekudyira yembudzi inonaka muNinh Binh, hazvigoneke kutaura Dung Pho Nui restaurant. Dung Pho Nui resitorendi ine nyore-kuwana-nzvimbo, imo muTrang Nzvimbo yevashanyi, saka inokwezva vazhinji vashanyi. Iyi zvakare imwe yemaresitorendi embudzi anonaka muNinh Binh anofarirwa zvakanyanya nevashanyi.
Mufananidzo: Resitorendi Dung Pho Gomo
Iyo resitorendi inonyanya kukosha mumakomo, saka yakakosha kuNinh Binh mbudzi yemakomo, huku yechikomo, muong nguruve… Imo, mbudzi yakagochwa, mbudzi isingawanzo uye hotpot yembudzi ndiyo inonyanya kusarudzwa nekudya nekuda kwenyama. , yakarungwa kuravidza uye yakashongedzwa zvakaisvonaka.
Mutengo wekuresitorendi weDung Pho Nui unokwanisika zvakare zvichienzaniswa nezvimwe zvitoro zvakawanda zvenyama yembudzi. Chinhu chakakosha ndechekuti iyo resitorendi ine nzvimbo yakavhurika, ine matende akaparadzana akagadzirwa akatenderedza dziva re lotus, achipa vanodya kunzwa kwekuzorora uye kuwirirana nezvisikwa.
4. Duc De Restaurant
Kero: Imba nhamba 29, mukoto, 458 Nguyen Hue mugwagwa, Nam Binh, Ninh Binh
Maawa ebhizinesi: 24/24h
Reference mutengo: 100,000 VND – 300,000 VND
Duc De resitorendi zvakare imwe yemaresitorendi embudzi epamusoro muNinh Binh ayo Digiticket angade kukuzivisa kwauri. Iresitorendi ine nzvimbo yakatambanuka uye yakachena.Kunyangwe ukaenda neboka rakakura kana boka diki, unenge uine nzvimbo yakavanzika. Duc De resitorendi haingo kwezva huwandu hukuru hwevashanyi, asi zvakare inonaka yeNinh Binh mbudzi yekudyira inodiwa nevakawanda veko.
Mufananidzo: FEMALENinh Binh restaurant Duc De
Kuuya kuNinh Binh Duc Go Restaurant, iyo inonyanya kunakidza ndiro dzembudzi, iwe uchave nemukana wekunakidzwa nemidziyo yakadai se: mbudzi yakagochwa, gumbo rembudzi rakabikwa nedoro, isingawanzo uye yakakangwa mbudzi … Nyama yembudzi inochekwa kuti iravire. , yakagadzirirwa kugadzirirwa maererano neresitorendi yakakosha recipe kuunza zvinonaka uye zvinoyevedza ndiro.
Iyo yekudyira inogara yakatarisa kunaka kwechikafu, saka izvo zvinongedzo zvinogara zvakasarudzwa kuti ive nechokwadi chekutsva kuunza kune vatengi madhishi emhando yepamusoro. Duc De Restaurant izano rine musoro kana uri kutsvaga chikafuNinh Binh chirongwa chekudya chinonaka.
Pamusoro pemaresitorendi embudzi anonaka muNinh Binh, unogona kunongedzera kune Yepamusoro makumi maviri chikafu chinonaka muNinh Binh ita kuti vanhu vade, havangapotsa!
5. Three Doors Restaurant
Kero: Trang An musha, commune, Truong Yen province, Hoa Lu, Ninh Binh
Maawa ebhizinesi: 9h00 – 22h00
Reference mutengo: 100,000 VND – 500,000 VND
Kana iwe uchitsvaga inonaka yekudyira yembudzi muNinh Binh, haufanirwe kupotsa Ba Cua resitorendi, inyanzvi mune zvinonaka zvembudzi ndiro. Ba Cua restaurant inokwezva nhamba huru yevashanyi uye vagari venzvimbo zvakafanana. Ba Cua resitorendi iri mujinga megomo, nzvimbo yakafaranuka uye ine mhepo, madhiri anoita seanopindirana nemasikirwo anouya pano.
Mufananidzo: FEMALEMadhoo Matatu Store
Ba Cua ine mukurumbira nendiro dzayo dzenyama yembudzi dzinogadzirwa zvinoenderana nezvakavanzika zvayo, kugadzira ndiro dzinonaka uye dzinoyevedza dzakadai sembudzi yakagochwa, mbudzi yakakangwa nemupunga inodyiwa neNinh Binh specialty yakapiswa mupunga. Chikafu chinopihwa chizere, nyama yembudzi inonhuhwirira, inotapira, uye midziyo yekugadzira inosarudzirwa kuti ive nehutsanana.
Pamusoro pezvo, madhishi akajairwa akadai sehuku yechikomo, Muong nguruve, Man pig paresitorendi anofarirwawo nevatengi. Professional sevhisi maitiro uye mutengo unokwanisika zvakare yakawedzera poindi yeBa Cua restaurant.
6. Luong Thuong restaurant 7 gomo mbudzi – hill huku
Kero: Le Lai, Nam Son, Tam Diep, Ninh Binh
Iresitorendi yeLuong Thuong inoshanda nehunyanzvi hwemakomo senge nyama yembudzi, huku yechikomo izano rakanaka mumaresitorendi embudzi anonaka muNinh Binh kuti unofanira kuedza kamwe chete. Iyo resitorendi ine nzvimbo yemazuva ano uye yakasarudzika, kusanganisira kamuri yakavanzika ine inoremekedzwa yakavanzika nzvimbo. Iyi iresitorendi yembudzi inonaka muNinh Binh yakasarudzwa nevashanyi vazhinji uye vagari venzvimbo pavanenge vachida kunakidzwa nenyama yembudzi.
Mufananidzo: FEMALELuong Thuong restaurant
Nyama yembudzi yeresitorendi yeLuong Thuong inonaka uye inoyevedza. Iro ndiro rinofarirwa zvikuru nevanodya nekuti nyama inochengetwa inotapira, asi isina kuomesesa, mbudzi yakagochwa inonhuhwirira, yakatsetseka uye inodyiwa nehunyanzvi hweNinh Binh wakapisa mupunga. Chekupedzisira, usakanganwe kunakidzwa nepoto yembudzi inopisa ine muto wakapfuma paLuong Thuong restaurant.
7. Chinh Thu Goat Meat Restaurant
Kero: Khe Thuong, Ninh Xuan, Hoa Lu, Ninh Binh
Maawa ebhizinesi: 7:30 a.m. – 10:00 p.m
Reference mutengo: VND 50,000- 500,000 VND
Chinh Thu restaurant ndeimwe yemaresitorendi embudzi ane mukurumbira muNinh Binh, mhuri yevaridzi ine tsika refu yekugadzira nyama yembudzi kwemakore anoda kusvika makumi mana. Kana iwe uchida kunakidzwa nezvinonaka uye zvakajairwa Ninh Binh mbudzi dzemakomo hunyanzvi, Chinh Thu restaurant ndiyo sarudzo yakanaka.
Mufananidzo: Chinh Thu Restaurant
Chinh Thu Restaurant ine nzvimbo yakanaka, imo muTrang Nzvimbo yevashanyi, saka zviri nyore kuti vashanyi vamire vachinakidzwa neNinh Binh cuisine. Kuuya kuChinh Thu restaurant, iwe uchanakidzwa nemidziyo yembudzi yechinyakare senge: mbudzi ne, mbudzi inopisa poto, yakagochwa yembudzi, roll yakakangwa yembudzi, yakagadzirwa nevabiki vane makore mazhinji echiitiko.
Kunyanya paChinh Thu restaurant, pane zvakare mukana wekuva nenyama yembudzi soup, iyo isingangonaka chete asiwo inovaka muviri, mashoma mamwe maresitorendi anopa chikafu ichi. Mutengo weresitorendi yeChinh Thu wakakwira zvishoma pane zvimwe zvitoro zvembudzi, asi mhando yacho yakanyatsokodzera kuti uedze uye unakirwe.
Kero: Square 2, Kim Da Street, Ninh Khanh Ward, Ninh Khanh, Ninh Binh
Maawa ebhizinesi: 8:00 – 23:00
Kim Da restaurant ndiyo imwe yemaresitorendi embudzi anonaka muNinh Binh ayo achiri nekuravira kwenyama yembudzi. Kim Da restaurant ine yakasarudzika 2-storey nzvimbo, yakagadzirwa ine stilt imba chimiro, yakakura uye ine mhepo. Vanodya vanouya kuresitorendi yeKim Da kuzonakidzwa vanonakidzwa nenzvimbo ine makomo, ichiunza kugadzikana kwekunzwa kuzorora.
Kim Da restaurant inopa ndiro dzakajairika kubva kunyama yembudzi senge: mbudzi ne, mbudzi yakakangwa inopihwa necrispy crispy fried rice. Pamusoro peNinh Binh nyama yembudzi hunyanzvi, nzvimbo yekudyira yeKim Da yavewo kero inozivikanwa yevanodya vanofarira kuravira kwehunyanzvi hwepamusoro senge yakabikwa, yakagochwa, yakakangwa muong yenguruve kana yakabikwa nemabhanana nehuku yakagochwa yemugomo. .
9. Huong Mai Restaurant
Kero: 850 Tran Hung Dao, Guta. Ninh Binh
Reference mutengo: VND 50,000- 200,000 VND
Huong Mai Restaurant iresitorendi inonaka yembudzi muNinh Binh pakati peguta. Huong Mai ine nzvimbo inotonhorera uye iri padyo, inounza nyaradzo kune vashanyi kana vachinakidzwa nekudya zvinonaka muresitorendi.
Menyu paresitorendi yakapfuma kwazvo uye yakasiyana. Kuuya kuresitorendi yeHuong Mai, haufanirwe kupotsa ndiro dzakadai se: mbudzi dzinotapira uye dzinonhuhwirira, hotpot yembudzi inopisa uye inonhuhwirira, mbudzi yakakanyiwa, nyama yembudzi yakabikwa yakasanganiswa nemupunga wakapiswa uye miriwo yemusango mune yechinyakare maitiro.
Iyo resitorendi inogara yakatarisa kunaka kwechikafu, saka chikafu chinogara chiri chitsva uye chakavimbiswa, nyama yembudzi inogadziriswa mukati mezuva kuitira kuti vanodya vanzwe vakachengeteka mukunakidzwa nayo.
10. Minh Beo De Restaurant 35
Kero: AH1, TT. Thien Ton, Hoa Lu, Ninh Binh
Reference mutengo: 60,000 VND – 300,000 VND
Minh Beo De 35 resitorendi inonaka yakachipa yemhando yekudyira yembudzi Ninh Binh. Iyi iresitorendi yembudzi muchikamu chakakurumbira chine ndiro dzembudzi dzinonaka uye dzinoyevedza. Nzvimbo yekudyira yakachena uye inotonhorera nekugona kushandira kusvika 150 vashanyi.
Mufananidzo: Minh Beo De Restaurant 35
Minh Beo De resitorendi inopa Ninh Binh mbudzi dzemumakomo nendiro dzese, menyu akapfuma anosvika makumi matatu nemaviri embudzi dzakasiyana. Madhishi embudzi akakosha senge akabikwa, ndimu isingawanzo kuvhenganiswa, yakakangwa kune yakasarudzika madhishi embudzi senge: mbabvu dzembudzi dzakabikwa netaro, dzakakangwa nemunyu uye mhiripiri nenzira dzakakosha dzekugadzira dzinogadzira ndiro dzinoyevedza.
Pamusoro penyama yembudzi yakagadziridzwa, nzvimbo yekudyira yeMinh Beo De inopawo nyama yembudzi mbishi kune vanodya vanoshaya. Vashandi vane hushamwari, chikafu chinonaka, mitengo inonzwisisika, Minh Beo resitorendi ndiyo kero yeresitorendi yembudzi inonaka muNinh Binh inofanirwa kuyedza mukuongorora kwezvekudya kweguta rekare.
Digiticket ichangobva kukuzivisa iwe runyorwa rwe inonaka yekudyira yembudzi muNinh Binh zvinokwezva hazvifanirwe kupotsa kana uchishanyira Ninh Binh. Ndokumbira uchengetedze rondedzero iyi ipapo kuti usakanganwe kunakidzwa nayo paunoshanyira Ninh Binh!
Mufananidzo wepikicha ndeyekodzero ye: Thanh Long Restaurant
READ Hồ Kênh Hạ Nha Trang | Excitinghochiminhcity
← “Vang bóng một thời” Ga Đà Lạt cổ kính, đẹp nhất Việt Nam | Excitinghochiminhcity
Top 13 Cửa Hàng Hoa Sài Gòn Nổi Tiếng Cho Món Quà Ý Nghĩa | Excitinghochiminhcity →